Home Wararka Cabsi laga qabo inuu dagaal ka dhasho loolanka kurisga beesha AgoonYar- Jowhar
Cabsi laga qabo inuu dagaal ka dhasho loolanka kurisga beesha AgoonYar- Jowhar
Loollan siyaasadeed keeni kara isku dhac ka qarxa Jowhar ayaa cabsi badan ku abuuray dadka ku nool xarunta maamulka Hirshabeelle.
Kursiga xuddunta u ah loollanka waxaa muddo ku fadhiya xildhibaan u dhashay beesha Agoonyar ee Harti Abgaal, uuna ka dhashay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxaa beesha Sheekh Shariif kursiga ku haysta laba beelood — Habar Nugaal iyo Cabdalla Carooni — oo iyagana Harti Abgaal ah abtirsiinyo ahaan.
Labada beelood waxay samaysteen isbahaysi iyagoo ku doodaya in xildhibaanka cusub ay tahay inuu ka yimidaado Habar Nugaal ama Cabdalla Carooni. Ciidammo badan, oo ay kala hoggaaminayaan saraakiil beelahan ka socda, ayaa tagay Jowhar.
Beesha Agoonyar waxay doonaysaa inay kursiga sii haysato. Ciidammo daacad u ah Sheekh Shariif ayaa ka mid ah ciidammada Jowhar tagay si ay u taageeraan in Agoonyar kursiga ku guuleysato mar kale.
“Sheekh Shariif isagoo doonaya inuu Madaxweyne noqdo ayuu beeshiisa ku taageerayaa inay kursiga ku guuleystaan. Ma fiicna in madaxweyne hore uu ciidammo beeleed weli leeyahay” ayuu yiri oday dhaqameed ku sugan Xaafadda Horseed ee degmada Jowhar. Maamulka Hirshabeelle weli kama hadlin halista in cabsida ku abuurtay dadka Jowhar ku nool.
Previous articleQeybtii 2aad: Waa Kuma Musharrax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre?
Next articleHogaanka Gobolka Gedo oo RW Rooble ku eedeeyay godob siyaasadeed
Ciidamad Amaanka oo xabsiga dhiga Cabdi Dhaanto